စာဖတ်ချိန်:4မိနစ်များ(နောက်ဆုံးတွင်နောက်ဆုံးရေးသားချိန်: 06/10/2020)
ဥရောပတိုက်ကြီးအနေဖြင့်အလွန်ကွဲပြားခြားနားသည်, ဥရောပခရီးသွားအမျိုးအစားတိုင်းအဘို့အရာတစ်ခုခုကိုကမ်းလှမ်း - ပါဝင်သည်အရသာကိုက်. ဒါပေမယ့်ဘယ်မှာသင့်ရဲ့အရသာဘူးသီးအများဆုံးနှစ်သက်သောပါလိမ့်မည်? What meal pic will have သင့်ရဲ့ Instagram အကြိုက် 100 ရဲ့ဖွင့်ယူပြီး? အံ့သြရပ်တန့်ခြင်းနှင့် munching စတင်ရန်. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထိပ်တန်း Picks နှင့်အတူဥရောပအစားအစာအကောင်းဆုံးနေရာများတွေ့ကြုံခံစား!
သငျသညျ savory တစ်ခုခုရှာနေခဲ့လျှင်, သငျသညျအတိုလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ ဒိန်ခဲအဘို့ options များ. သူတို့ကတိုင်းလမ်းထောင့်အပေါ်စာသားများမှာ. Our favorite? တစ်ဦးက ရည် waffle နှစ်ခုပါးလွှာ waffles ၏ဖွဲ့စည်း, နက်ရှိုင်းသောအတွင်းပိုင်း gooey ကောင်းမြတ်ခြင်းနှင့်အတူကြော်နှင့်အမှုန့်သကြားနှင့်အတူချွတ်ထိပ်ဆုံး.
ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပင်အီတလီနိုင်ငံတို့ပါဝင်သည်ဥရောပအစားအစာအကောင်းဆုံးနေရာများနာမည်စဉ်းစားနဲ့လို့မရဘူး! ပိုပြီးအထင်ကရအစားအစာအတူဥရောပတိုင်းပြည်ရှိပါသလား? ဟယ်လို, carbs! ပီဇာနှင့်ခေါက်ဆွဲစာရင်းသွားပါကလူတိုင်းအပေါ်များမှာ! တိုင်းဒေသဟာသူတို့ရဲ့အထူးရှိပြီးရာသီမှီခိုကြောင်းရုံသတိရ.
ဤသည်ဥရောပအစားအစာအကောင်းဆုံးနေရာများထဲကတစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမယ့်သတိပေးမရှိပဲမလာပါဘူး: "entrée" "အဓိကပန်းကန်ကိုဆိုလိုတာမှကမ္ဘာ၏အခြားအစိတ်အပိုင်းများတွင်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်,"ဒါပေမယ့်ပွငျသစျထဲတွင်, ဒါဟာအမှန်တကယ် "ကိုဆိုလိုသည်appetizer.အဓိကဟင်းအဘို့အ plat "" appetizer နှင့်အတှကျ "entrée" ဒါနှင့်အတူကပ် ", သငျတို့သအပြည့်အဝအစာအိမ်နှင့်တစ်ဦးအလွန်ကြီးစွာသောအတွေ့အကြုံနှင့်အတူအခြားဘက်မှာထွက်လာလိမ့်မယ်.
ကျနော်တို့က Brexit ၏ရလဒ်ကိုမသိမှီတိုင်အောင်လန်ဒန်ရဲ့အစားအသောက်မြင်ကွင်းတစ်ခုနေဆဲဥရောပအစားအစာအကောင်းဆုံးနေရာများ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်. လန်ဒန်မြင်ကွင်းတစ်ခု ရိုးရာအချက်အပြုတ်ဗျာဒိတ်ရူပါရုံ mish-mash နှင့်ခေတ်မီဆန်းသစ်တီထွင်မှုဖြစ်ပါသည်. လန်ဒန်အဘယ်သူမျှမအစားအစာ-ဗဟိုပြုခရီးစဉ်ကအနည်းဆုံးတနေ့လည်ခင်းလက်ဖက်ရည်မပါဘဲပြည့်စုံဖြစ်ပါသည်, ခါးသီးမှုတစ်ခုပိုင့ဒါမှမဟုတ်တချို့ takeaway ဖြင့်လိုက်ပါသွားသည့်ရပ်ကွက်အတွင်းအရက်ဆိုင်မှာတနင်္ဂနွေကင် ငါးနှင့်ချစ်ပ် မြို့တော်ရဲ့အများအပြား '' chippies တစ်ဦးမှ။’ Michelin-ကြယ်ပွင့်မီးဖိုချောင်ကပိုသင့်ရဲ့အရာရောက်နေတယ်ဆိုရင်, ထို့နောက်သင်သည်လက်ျာအရပ်၌ရှိနေတုန်းပဲနေ. သုံး Michelin ကြယ်ပွကိုင်သောဗြိတိန်နိုင်ငံငါးခုစားသောက်ဆိုင်သည်လက်ရှိရှိပါတယ်. အဆိုပါရေနားအင်း, Alain Ducasse အဆိုပါ Dorchester မှာ, အဆိုပါ Araki, စားသောက်ဆိုင်ဂေါ်ဒွန် Ramsay, နှင့် The ဆီ Duck.
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, သင်တို့သည်ငါတို့၏ဓါတ်ပုံနှင့်စာသားယူနိုင်ပါတယ်ဖြစ်စေနဲ့ ကိုယ့်ကိုလင့်ခ်နှင့်အတူခရက်ဒစ်ပေး ဤ blog post မှ, သို့မဟုတ်သင်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fexperience-europes-best-food-spots%2F - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အောက်ကိုဆင်း)